Sida loo Dayactiro Faylka Excel ee Musuqmaasuqay ama Waxyeello soo gaadhay
Bogga ugu weyn Products DataNumen Excel Repair Sida loo Dayactiro Faylka Excel ee Musuqmaasuqay ama Waxyeello soo gaadhay
Marka feylashaada Microsoft Excel .xls, .xlw iyo .xlsx ay waxyeello soo gaarto ama ay kharribmaan sababo kala duwan awgood oo aadan si guul leh ugu furi karin Excel, waxaad isticmaali kartaa tallaabooyinka soo socda si aad u dayactirto faylka musuqmaasuqa ah:
Fiiro gaar ah: Kahor starxoqdo habka soo kabashada xogta, waxaad u baahan tahay inaad samee faylkaaga faylkaaga 'Excel' ee asalka ah ee musuqmaasuqa ah. Tani waa most talaabo muhiim ah oo dad badani iloobi doonaan.
Ugu horreyntii, Microsoft Excel waxay leedahay shaqo dayactir oo lagu dhisay. Markay ogaato inay musuqmaasuq ku jiraan faylkaaga 'Excel', waatart Soocelinta Faylka hab oo isku day inaad ku hagaajiso faylka adiga. Xaaladaha qaarkood, haddii ay Soocelinta Faylka hab ma aha start toos ah, markaa waad ku qasbi kartaa Excel inuu gacantaada ku hagaajiyo faylkaaga. Tusaale ahaan u qaado Excel 2013, talaabooyinka waa:
Sanduuqa wadahadalka Furan, xulo feylka aad rabto inaad furto, oo guji fallaarta ku xigta kan Open Badhanka.
Riix Fur iyo Dayactir, ka dibna dooro habka aad rabto inaad u isticmaasho soo kabashada buuggaaga shaqada.
Dooro Repair Ikhtiyaar haddii aad rabto inaad ka soo kabato xogta ugu badan ee suurtogalka ah faylka musuqmaasuqa ah.
If Repair ma shaqeynayo, ka dibna isticmaal Soo saar Xogta inaad isku daydo inaad faylka ka soo saarto qiimayaasha unugyada iyo qaaciidooyinka.
Nidaamyada dib u soo kabashada ayaa wax yar ka duwan noocyada kala duwan ee Excel.
Iyada oo ku saleysan baaritaankayaga, habka 1 badanaa wuxuu u shaqeeyaa kiisaska marka musuqmaasuqu ka dhaco dabada faylka. Laakiin ma shaqeyn doono marka musuqmaasuqu ka dhaco madaxa ama bartamaha faylka.
Haddii habka 1 uu guuldareysto, weli waxaa jira habab dhowr ah oo aad ku hagaajiso feylkaaga Excel oo aad gacanta ku haysato Excel, oo ay ku jiraan qorista makro yar oo VBA ah, waxaad ka heli kartaa macluumaad faahfaahsan https://support.microsoft.com/en-gb/office/repair-a-corrupted-workbook-153a45f4-6cab-44b1-93ca-801ddcd4ea53
Waxa kale oo jira qalab bilaash ah oo ka socda dhinacyada saddexaad oo furi kara oo akhrin kara faylasha Microsoft Excel, tusaale ahaan,
OpenOffice at http://www.openoffice.org. Kani waa mashruuc caan caan ah oo furan oo loogu talagalay in lagu taageero qaabab faylasha Xafiiska, oo ay ku jiraan faylasha Excel. Software wuxuu ku shaqeyn karaa Windows.
LibReOffice at https://www.libreoffice.org/. Qeyb kale oo bilaash ah.
KingSoft Waraaqaha https://www.wps.com/. Kani waa qalab bilaash ah oo Windows ah oo furi kara faylasha Excel.
Waraaqaha Google ee https://www.google.com/sheets/about/ sidoo kale furi karaa faylka 'Excel' khadka tooska ah.
Mararka qaarkood marka Excel uu ku guuldareysto inuu furo faylkaaga, qalabkani wuxuu awood u yeelan karaa inuu si guul leh ku furo. Hadday sidaas tahay, ka dib markii feylka 'Excel' la furo, waad u keydin kartaa oo keliya fayl cusub oo qalad la'aan noqon doona.
Faylasha xlsx, runti waa koox faylal ah oo la isku soo ururiyey Zip qaabka faylka. Sidaa darteed, mararka qaarkood, haddii musuqmaasuqa kaliya ay sababaan Zip faylka, markaa waad isticmaali kartaa Zip qalabka dayactirka sida DataNumen Zip Repair si loo hagaajiyo feylka, sida soo socota:
Haddii loo maleeyo in faylka Excel ee musuqmaasuqa ahi uu yahay a.xlsx, markaa waxaad u baahan tahay inaad dib ugu magacawdo a.zip
Isticmaalka DataNumen Zip Repair si loo hagaajiyo a.zip soona saaray fayl go'an a_fixed.zip.
Magacaabid_fixedzip dib ugu_fixed.xlsx
Adoo adeegsanaya Excel si aad u furto a_fixed.xlsx.
Weli waxaa jiri kara digniino marka la furayo feylka go'an ee 'Excel', iska daa inaad iska indhatirto Excel ayaa isku dayi doonta inay furto oo ay hagaajiso feylka go'an. Haddii feylka si guul leh loo furi karo, markaa waxaad ku keydin kartaa waxa ku jira fayl kale oo aan qalad lahayn.
Haddii dhammaan hababka kor ku xusan ay fashilmaan, markaa waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho DataNumen Excel Repair si loo xaliyo dhibaatada. Waxay iskaan ku sameyn doontaa feylasha la musuqmaasuqay waxayna kuu soo saari doontaa feylal cusub oo aan qalad lahayn oo adiga toos ah